Boodhka Barcelona Oo Go'aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Ernesto Valverde Iyo Lionel Messi Oo Soo Fara Galiyay. - Gool24.Net
Boodhka Barcelona Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Ernesto Valverde Iyo Lionel Messi Oo Soo Fara Galiyay.
Kooxda Barcelona ayaa soo martay maalmo jaho wareer ah oo ay isku raaceen guuldarooyinkii Champions League iyo finalkii Copa Del Rey ee ay labada koob ku seegeen.
Barcelona ayaa dhexda ugu jirtay xaalad ay dhibaato wayni kaga soo gaadhay guuldaradii ay Champions league kaga hadhay ee kulankii Liverpool kaas oo sidoo kale sabab wayn u noqday in kooxda Valencia ay ku garaacday finalkii Copa Del Rey.
Mustaqbalka tababare Ernesto Valverde iyo ciyaartoy badan oo kooxda kowaad ka tirsan ayaa mustaqbalkooda shaki xoogan la galinayay iyada oo xataa la sugayay in maamulka Barca ay shaqada ka caydhiyaan Valverde.
Laakiin waxaa la ogaaday go’aanka ay boodhka kooxda Barcelona ka qaateen mustaqbalka Ernesto Valverde kaas oo caadaadis badan ku hoos noolaa tan iyo ceebtii Anfield ee Champoins League.
Kadib guuldaradii finalkii Copa Del Rey ee Valencia, madax waynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa iskugu yeedhay boodhka kooxdiisa si ay uga arinsadaan xaalada qalalaase ee ay kooxdu ku jirtay.
Dhinaca kale ciyaartoyda muhiimka ah ee Barcelona ayaa kulan adag oo dood ah ka yeeshay dhibaatada kooxda iyo sida xal loogu heli karo waxaana kulankan hogaaminayay kabtankooda Lionel Messi.
Roberto Martinez iyo Ronald Koeman oo hadda gacanta ku haya shaqada tababaranimo ee xulalka Belgium iyo Holland sida ay u kala horeeyaan oo shaqada Barca lala xidhiidhinayay ayaa dareenkooda ka hadlay iyaga oo aan meesha ka saarin in ay Camp Nou maamuli karaan.
Maxay Boodhka Barcelona Ku Go’aamiyeen Mustaqbalka Valverde?
Wargayska Marca ee Spain ka soo baxa ayaa shaaciyay in boodhka kooxda Barcelona ay go’aan ku gaadheen in Valverde uu kooxda sii hayo ilaa xili ciyaareedka soo socda waxaana sidoo kale Valverede taageeray madax wayne Josep Maria Bartomeu.
Wararka ayaa sheegaya in Lionel Messi uu soo fara galiyay arinta Valverde iyo mustaqbalkiisa isla markaana uu taaageero u muujiyay waxaana taageeraada Messi ku raacay ciyaartoy muhiim ah oo ay ka mid yihiin Jordi Alba iyo Ivan Rakitic.
Inkasta oo boodhka kooxda Barcelona, madax wayne Josep Maria Bartomeu iyo ciyaartoyda uu Lionel Messi hogaaminayaa ay taageero isla garab taageen Valverde waxaa la filayaa in halkii laga badali lahaa tababaraha ay ciyaartoy badani kooxda ka bixi doonto.
Josep Maria Bartomeu ayaa hore u shaaciyay in uu dhaq dhaqaaq suuqa ahi kooxdiisa ka jiri doono kuwaas oo iskugu jira ciyaartoy la keeni doono iyo kuwo hadda kooxda ka tirsan oo bixi doona.
Barcelona ayaa si layaableh loo sheegay in ay wada xaajood kula jirto kooxda PSG oo ay ka doonayso Neymar Jr iyada oo taas badalkeeda ay PSG doonayso saxiixa Ousmane Dembele waxaana jiray waxyaabo badan oo ku soo kordhaya xaalada Barcelona.
Madax wayne Josep Maria Bartomeu ayaa la filayaa in uu samayn doono isbadalo badan si uu Valverde u siiyo fursad kale oo uu ku sixi karo dhibaatadii ay Barcelona xili ciyaareedka ku dhamaysatay.
Wixii ka soo kordha xaalada Valverde iyo haddii ay dhacaan wax isbadal ah oo sida ay hadda u taagan tahay ka duwan waxaad insha Allah kula socon doontaan wararkeena kale.
Wargaysyada ugu beenta badan caalamka weeyi kuwaasi